Dhacdo Naxdin leh: Wiil isaga oo Ciyaarayay Banooni oo si kedis ah u geeriyooday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dhacdo Naxdin leh: Wiil isaga oo Ciyaarayay Banooni oo si kedis ah u geeriyooday
Wararka aan ka heleyno Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee shalay halkaas ku geeriyooday Wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa dadka deegaanka.
Dad ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa soo weriyay in Wiilka uu geeriyooday isaga oo ciyaarayay Kubad ama banooni, kadib markii uu si kedis ah uu wadnaha uga Istaagay.
Allaha u naxariistee Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Yaxye Maxamed, isagoo kamid ahaa dadka deegaanka, waxaana geeridiisa aad uga naxay dhalinyaro kale oo ay isla ciyaarayeen Ciyaar kubadda Cagta aheyd.
Da’da Wiilka geeriyooday ayaa waxaa lagu sheegay 14-sanno jir, waxaana la tilmaamay in Wiilka isaga oo nabad qaba uu Garoonka ku ciyaarayay Kubadda uu galay, hayeeshee mar qura uu dhulka ku dhacay, kadibna sidaas uu ku dhintay.
Qaar kamid ah dhalinyaradii ku sugneyd Garoonka xiligaas ayaa ka naxay geerida Yaxye oo loo yaqaano Kaniini, isla markaana waxaa markii dambe halkaas gaaray qaar kamid ah Eheladiisa oo soo qaaday Meydka.
Nin hubeysan oo weerar geystay Magaalada Muqdisho oo la toogtay
Wararkii ugu dambeeyay Askari Dil iyo dhaawac ka geystay degmada…